Fihaonambe Apokalypsy Antananarivo - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Tontosa ny sabata faha 08 ny volana oktobra 2011 lasa teo, tetsy amin’ny fiangonana Apokalypsy Ambohimarina Itaosy, ny fihaonam-be rezionalin’ny Fiangonana Apokalypsy eto Antananarivo. Fotoana izay natokan’ireo vahoakan’Andriamanitra maro be niaraha-nifaly indray niaraka tamin’ny Ray aman-dReny Pasitera Mailhol sy ny ankohonany.
Tao aorian’ny fifampizaràna ireo vaovao maro samihafa, dia nitondra fampaherezana ho an’ireo vahoakan’Andriamanitra ny Pasitera Mailhol. Nisongadina tao anatin’izany fotoana izany ny amin’ny fitiavana sy ny fanetren-tena. Notsindrin’ny Pasitera tamin’izany fa « ny fitiavana dia azo aseho amin’ny fizarana amin’ny tsy manana sy ny fahalemem-panahy amin’ny olona rehetra. Na dia misy aza ny zavatra izay tsy eken’ny saina amin’ny maha olombelona hataon’ny hafa, dia miezaka miala amin’ny fifandirana hatrany.
Izay rehetra izay dia mitaky fanetren-tena satria sarotra ny manatanteraka azy. » Isan’ny nanamarika ity fotoana ity ihany koa ny firaisana latabatra amin’ny Tompo ka dia ireo vahoakan’Andriamanitra maro be tonga teny an-toerana dia nandray anjara tamin’izay fotoana izay avokoa.
Ny famaranana ny fampianarana Apokalypsy izay atao any Mahanoro indray, ny sabata faha 15 ny volana novambra taona 2011, no fandaharam-potoana manaraka koa dia manasa antsika rehetra hiaraka hanao rodobe amin’izany fotoan-dehibe izany.
Publié dans ApokalypsyÉtiqueté avec antananarivo